Nezvedu - Pandawill Technology Co., Ltd.
Pandawill Matunhutimu ine makore anopfuura gumi ane ruzivo muPCB yekugadzira uye yemagetsi indasitiri yekugadzira. Nenzvimbo yekugadzira yakakwana ye2,000 mativi emamirimita uye vashandi vane hunyanzvi vanopfuura 500, isu tinokwanisa kukupa pcb yekugadzira uye gungano kubva nekukurumidza kutendeuka, prototype kune vhoriyamu kugadzirwa.
Hunhu ndicho chinhu chedu chekutanga kukoshesa, inzira yakakosha kune ese maitiro ekugadzirisa dhata, mbishi zvinhu, mainjiniya, kugadzira uye rutsigiro rwehunyanzvi rwatinopa. Isu tiri ISO9001, ISO 14001 yakagamuchirwa, UL yakatenderwa. Zvese zvigadzirwa zvinogadzira IPC zviyero uye zvinoenderana neyako yekushandisa zvinodiwa uye zvese mbishi zvigadzirwa zvinoshandiswa ndezvepamusoro soro kuita mamaki anotengeswa aripo.
Kunze kwemhando, mutengo unogara uri iwo wekufungisisa kukuru. Yedu masevhisi anozokutendera iwe kuve unonyanya kukwikwidza mutambi mumusika wako, nekutsigira yako mhando, uye kukuunzira iwe kumucheto maererano nemitengo, kuwana kune yakatsaurwa & yakasarudzika zvigadzirwa zvekugadzira mune inodhura-inokwikwidza nyika. Kunzwisisa kwedu kwekuvaka nekuparara kwemitengo kana tichigadzira bhodhi redunhu rinotibvumidza kutarisa nzira kupfuura hupfumi hwakareruka hwekuchengetedza zviyero uye kazhinji kukonzeresa kwekudzokorodza kwakawanda kunogona kuve nemhedzisiro inoshamisa pamutengo wakazara. Taura nesu uye ona zvatingaite kudzikisira yako-kuenda bhodhi kushandisa.
Isu tinochinjika kune zvako zvikumbiro. Kunze kwezvinhu zvakajairika, tekinoroji, nguva yekutungamira nezvimwe, isu tinogara tichiedza kuzadzikisa mhando dzakasiyana dzezvinodiwa kubva kune vatengi vedu kubva nekukurumidza kutendeuka prototype kusvika kudhura inoshanda vhoriyamu kugadzirwa.
Kutenda kune vedu vakazvipira vanoshanda nesimba vashandi, ikozvino isu tiri kushumira vanopfuura 1000 vatengi pasi rese. Zvigadzirwa zvedu nemasevhisi anoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri, ekurapa, kufonera, smart imba, Internet yechinhu uye indasitiri yemotokari. Isu tinotenda zvikuru nemukana uye kuvimba kubva kumutengi wedu. Nekudaro, isu tinogara tichiedza kuve nhanho kumberi kune vatengi vedu nekuratidza zvigadzirwa zvakavimbika pamakwikwi mutengo uye yakanakisa nguva yekutungamira. Tiri kutarisira zvikuru kushanda nemi.